လှည့်ကွက်တွေပြည့်နေတဲ့မှုခင်းဇာတ်ကားမျိုးတွေကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေ အတွက် ဒီလထဲမှ အသစ်စက်စက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ဒီမှုခင်းဇာတ်ကားလေးကတော့ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတွေနဲ့ ရဲတွေအကြား တစ်ပတ်ရိုက်မှုလှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ အခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ၊ ဇာတ်ကားအစမှာကတည်းက မူးယစ်ရာဇာကြီးအယ်လ်ဂေါ်ဒိုတစ်ယောက် မြှုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ငွေအိတ်တွေပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း ရဲအရာရှိတက်ခ်ခါနဲ့ သူ့လူတွေဟာ အယ်လ်ဂေါ်ဒိုရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ ဘရုစ်တို့မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုလုပ်တာကို ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရဲတွေသေဆုံးခဲ့မှုကြောင့် တက်ခ်ခါဟာလည်း ရာထူးကနေရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပြီး ဘရုစ်တစ်ယောက်လည်း မှောင်ခိုကြောင့် 5နှစ်ကြာအောင်ထောင်နန်းစံခဲ့ရပါတော့တယ်၊
ဒီလိုနဲ့ ဘရုစ်တစ်ယောက် ထောင်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ စောင့်ကြည့်ရေးအရာရှိ အလှပဂေးလေးလေလာရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာနေရင်းနဲ့ကို သူ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး သူ့ဆရာရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ $33million ကိုရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်တွေချပါတော့တယ်၊ ရဲမှူးဟောင်းတက်ခ်ခါဟာလည်း ဘရုစ်လွတ်လာတာနဲ့ မကျေပွဲနွှဲဖို့ ဘရုစ်နောက်ကို လိုက်ပါတော့တယ်၊
ဒီကားမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ ဘရုစ်ကသူတစ်ပတ်ရိုက်ထားတဲ့ငွေအိတ်ကြီးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ယူမှာလဲ? သူ့ကိုရော ဘယ်သူတွေကတစ်ပတ်ပြန်ရိုက်ဦးမှာလဲ? ရဲမှူးဟောင်း တက်ခ်ခါကရော ဒီကိစ္စတွေနဲ့လွတ်ကင်းမှုရှိပါ့မလား? ဘရုစ်တစ်ယောက် သူ့ဆရာမူးယစ်ရာဇာရဲ့လက်ထဲကိုပဲ ငွေတွေပြန်ပေးလိုက်ရမှာလား? သူတို့အဖွဲ့ပဲ millionaire တွေဖြစ်သွားကြမှာလား? ဒီလိုမျိုး ‘လား’ပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲမျောကြည့်ရမဲ့ ကားကောင်းလေးမို့ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုအဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်